Inguquko Yomuntu Owileyo | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
UTong Xin Esifundazweni saseFujian
Ngazalelwa ezindaweni ezingaphandle kwasemadolobheni. Ngazalelwa emndenini wabalimi abazithobile futhi phezu kwalokho umndeni wethu wawumbalwa ngokwesibalo, ngakho sasiqinelwa esikhathini esiningi. Ngenkathi ngineminyaka eyi-13, kukhona ingane eyashaywa umuntu othile wangaphandle kwesigodi sethu. Abantu basendaweni banameka ubaba ngecala bathi uyena oqale obasele lokho futhi bathi babezosesha ikhaya lethu bese besimuka impahla yethu, bathathe izingulube zethu baze bashaye nobaba. Kukhona nesikhathi lapho omunye wasendaweni athatha inethi yethu yokudoba wagweva nayo. Wathi uma ubaba ethi uyoyilanda, lo muntu wamshaya ubaba, ethembele emandleni nasethonyeni lakhe. Ubaba wami kwadingeka azehlise njengoba wayazi ukuthi akanamali futhi akanamandla. Umama watshela abafowethu nami ukuthi esikhathini esizayo kufanele sizilwele, singaphinde siphile impilo yokucindezelwa kanje. Ngisemncane futhi ngenyanya impilo yokungabi khona kobulungiswa emphakathini, ngangizimisele ukuthi esikhathini esizayo ngangizoba ngovelele phakathi kwesixuku futhi ngithole inhlonipho, futhi ngingaphindi ngicindezelwe. Ngakho ngafunda ngokukhulu ukuzimisela, kodwa ngangingakhaliphile kakhulu futhi ngangakwazi ukungena enyuvesi, ngakho ngakhetha umkhakha wombutho wezempi ngajoyina khona kalula ngenxa yabantu engangibazi.
Ngenkathi ngiqala ukujoyina, kwaba nzima ukujwayela wonke umsebenzi wakhona onzima nongcolile kanye nokukhombisa ukuzimisela kwami ukujabulisa abaphathi kanye nokuba ngithole ukunyuswa esikhundleni ekuhambeni kwesikhathi. Noma kunjalo, noma ngangizama kangakanani, angikwazanga ukuthola ngisho ukuba umholi wethimba. Futhi ngangihlezi ngenziwa inhlekisa futhi ngiqinelwa ngabalingani bami ngenxa yezingubo zami ezazidabukile kanye nokuba mpofu, nokwenza ukuba ngikhuthalele kakhulu ukuba ngovelele. Ngokuhamba kwesikhathi, ngosizo lwezeluleko zabanye basesigodini sami, ngafunda ukuthi ukuhlolwa nokunyuselwa esikhundleni embuthweni wezempi kwakungancikile ekutheni usebenza kanzima kanjani, kodwa kwakuncike ekukhipheni izipho. Yize noma ngangicabanga ukuthi lona kwakungumkhuba onyanyekayo, kwakuyiyona ndlela kuphela eyayingenza ngenyuselwe esikhundleni. Ngakho, ngazimisela ukuthatha yonke imali engangiyilondolozile nginikeze abaholi bami izipho futhi ngithole nabantu engangizobazi abasezikhundleni; emva kwalokho ngagcina sengikwazile ukubhalisa ekolishi lombutho wezempi. Kodwa emva kokuphothula izifundo zami, ngabelwa ukuba ngibe umpheki enkantini ngenxa yokuba ngangingenayo imali eningi yokupha abasezikhundleni izipho, futhi kamuva nganikwa isikhundla sokuba ngunsumpa wenkambu ethile, kodwa ngegama nje kuphela. Emva kweminyaka embalwa nje kwangicacela ukuthi abaphathi ababajezisi abantu ababapha izipho futhi awukwazi kufinyelela ndawo ngaphandle kokubakhothamela. Uma ufuna ukuba nendawo, kufanele uzame ngayo yonke indlela ukwenza imali khona uzokwazi ukupha izipho, kungenjalo ngeke ukwazi kufeza lutho noma ngabe unamakhono angakanani. Ukuze ngikwazi ukufeza amaphupho ami, ngaqala ngenza imali futhi ngayifuna nhlangothi zonke: Ngakhulisa futhi ngahabazisa ngamabomu lapho ngenza izilinganiso zokuthenga ukudla, ngazitholela imadlana encane yobugebengu eceleni; ngithe uma ngibona abanye onsumpa bedayisa ilayisi, ngadayisa ngokuyimfihlo iloli lelayisi lombutho wezempi nalapho engazuza izinkulungwane ezimbalwa zamayuan, kanjalo kanjalo. Yize noma ngangikade ngikholwa kuJesu selokhu ngiseyingane futhi ngazi kahle ukuthi lezi zinto engangizenza zaziwubugebengu, kodwa futhi ngangihlezi ngikhathazekile ngokuthi ngingase ngibanjwe futhi ngigwetshwe ngelinye ilanga, intshisekelo yokukhushulwa esikhundleni yangidudula ukuba ngenze lezo zinto ezaziphikisana nonembeza wami. Ngesinye isikhathi ngase ngilondoloze imadla eningi, ngaqala ukuzincengela kubaphathi futhi ngibapha izipho abazithandayo. Njalo uma kunomholi owayengivakashele ngangizenza matasa ngihambe nabo siyophuza, sicule, sivakashele nabaqwayizi…. Ngenza konke okusemandleni ami ukuzama ukuzikhuhla kubona. Ngazama ukubathokozisa ngazo zonke izindlela. Njalo uma abaholi bedinga usizo oluthile, ngangikuthokozela ukunikeza usizo. Noma ngubani owayenobudlelwane obuhle nabaholi, ngangiye ngizame ukuzisondeza kuyena ukuze phela angincome kubaphathi. Ngaleyo minyaka, ngakhushulelwa ngokushesha esikhundleni somkhuzi webutho ngenxa yakho belu ukuncetheza njengokwemithetho yezwe. Ekugcineni ngaze ngavelela futhi ngase ngizokwazi nokubuyela ekhaya njengomnqobi! Emva kwaleso sikhathi, njalo uma ngibuyele ekhaya, abantu basesigodini babeye bangingunge, bangibabaze futhi bangincome, nokwakujabulisa inhliziyo yami nokuzazi kwami kakhulu. Izimpokophelo nezifiso zami zakhula. Njengokusho kwabantu, “Ezinye izikhulu zizibhekelela zona zodwa nje, hhayi umphakathi,” “Lisebenzise igunya uma usenalo, ngoba uma ungasenalo, ngeke usakwazi ukulisebenzisa,” kanye nokuthi “Ayikho into eyisikhulu esingenankohlakalo.” Ngakho-ke, ngaqala ngathokozela amagunya okuba yisikhulu. Ngangiye ngithole izinto mahhala noma kuphi lapho ngangihamba khona, futhi uma kunomuntu ongicela usizo, ngangiye ngithi akanginike isipho bese ngingamsizi uma isipho sasingangigculisi. Ngaqala ngaba umuntu wokudla okubizayo kanye nezingubo ezibizayo, futhi ngaba umuntu ozithwele kakhulu. Ngithembele ekutheni ngase ngiphenduke “intandokazi yabaholi ababalulekile njengokhomanda kanye nokhomisa wezombusazwe, ngaze nami ngaba ngokuzithwala kangangokuthi ngangiqinela ngibukisa ngokuthi ngangazi abasezikhundleni eziphezulu, ngibiza izipho kwengibaphethe ngamagama alaba baholi. Ngaguquka kanje ekubeni ngumKristu ojwayelekile wasezindaweni zasemakhaya ngaphenduka umuntu oyigovu, onenkohliso nozithwalayo.
Njengoba ngase nginenkohlakalo sengiwile, ngadlulisela imvelo yami embi nakwabanye. Esikhathini esiningi nganginokusola ngaphandle kwesizathu ukuthi unkosikazi wami owayesebenzela inkampani yangaphandle wayephinga; lokhu kwaholela ezingxabanweni eziningi phakathi kwethu kanye nokuqhelelana. Ngo-2006, inkosikazi yami yayisiphelelwe yisineke yafaka isicelo sesahlukaniso; lokhu kwezwakala njengehlazo elikhulu kimina, ngakho angizange ngikuvume. Ebusuku ngase ngivame ukucabanga ngempilo yami. Ngacabanga ngathi: Ngangikade ngilangazelele ukuba ngovelele kusukela ebuncaneni bami kanti mina nomkami sasivelele emikhakheni esasisebenza kuyona. Isimo sasekhaya sasisihle ngandlela yonke futhi abanye abantu babelangazelela ukufana nathi, pho kungani ngangiphila nobuhlungu obungaka, futhi kungani kwase kufinyelele ekutheni umkami afune isahlukaniso? Ngisho nendodana yethu yayihlupheka kanye nathi. Ingabe impilo yethu yayiyilokhu engangifuna ibe yikona? Ingabe ngempela ngiphilelani? Njengoba ngangizizwa ngilahlekile futhi ngididekile, umkami wamukela insindiso kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina. Ngenxa yemihlangano eminingi nokuhlanganyela nabazalwane nodade nabafowethu, waba ngoya ngokuya ekhulelwa yithemba, wayeka nokuqophisana nami, futhi wangaphinde akhulume ngendaba yesahlukaniso. Kunalokho, wayematasa eshumayela ivangeli egcwalisa izibopho zakhe. Kamuva, ngokugqugquzelwa umkami nomama, nami ngaqala ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla.
Ngenxa yempilo yasenkonzweni, ngaqonda ukuthi uNkulunkulu ungcwele futhi ulungile, kanye nokuthi uyakwenyanya ukungcola nenkohlakalo yabantu. Ngacabanga ngezindlela zokungcola engase ngizifake kuzona embuthweni wezempi kanye nokuthi ngangingeke nhlobo ngikwazi ukusindiswa nguNkulunkulu uma ngangingashintshi isimo sami sakudala, ngakho ngaqala ukufunda izwi likaNkulunkulu ngokukhulu ukulangazelela, nginethemba lokuthola isisombululo kulona. Ngelinye ilanga, ngafunda la mazwi avela kuNkulunkulu: “Uzalelwe ezweni elingcole kangaka, umuntu yilokhu ehangulwe umphakathi, uthonywe yinkambiso endala, futhi ufundiswe ‘ezikhungweni zemfundo ephakeme’. Ukucabangela emuva, ukuziphatha okubi, ukubuka kabi impilo, indlela yokuphila enyanyekayo, ukuphila okungenamsebenzi, indlela yokuphila namasiko onakele—zonke lezi zinto zibe nemingenela enzima enhliziyweni yomuntu zabukela phasi futhi zahlasela unembenza wakhe. Ngalokho—ke umuntu uselokhu eqhele kakhulu kuNkulunkulu, futhi ulokhu ephikisana Naye” (“Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu adalula izimfihlo ekujuleni kwenhliziyo yami; ngangithuke kakhulu. Kuleya minyaka yokusebenza embuthweni wezempi, ngangiye ngalandela “imithetho eyaziwayo” yezwe ukuze nje ngivelele. Ngangiye ngenza izinto eziningi ezazihlupha unembeza wami. Ngase ngiphenduke isicebi ngezinzuzo ezingalungile futhi ngaphila impilo yobumnyama nenkohlakalo—ngangihlezi ngizitika ngesono kodwa ngingenamahloni. Kwase, amazwi kaNkulunkulu akagcinanga nje ngokungivumela ukuba ngikwazi ukuhlaluka okuhle kokubi, kodwa angenza ngabona ngokucacile umsuka wokuwa kwami kanye nenkohlakalo yami. Kwavela ukuthi lezi zinhlupho zazivela kuSathane. KwakuwuSathane owaphendula lo mhlaba indawo yobubi nobudlova lapho abantu abangakwazi ukuzivikela, abantu abathembekile becindezelwa khona bangakwazi ukuziphilela ngenkathi abanamandla, abanethonya nabangozwilakhe bechuma. Kulo mphakathi kwakugcwele izinzwabethi nezinkoleloze ezifana nokuthi “Wonke umuntu uzifunela okwakhe wonke umuntu ezibhekelele yena,” “Iziphathimandla azizenzi lukhuni izinto zalabo abazipha izipho,” “Awukwazi kufinyelela ndawo ngaphandle kokubakhothamela,” “Ezinye izikhulu zizibhekelela zona zodwa nje, hhayi umphakathi,” “Lisebenzise igunya uma usenalo, ngoba uma ungasenalo, ngeke usakwazi ukulisebenzisa,” njalonjalo. Ngathathekiswa yilezi zisho ezimbi, futhi ngenxa yokucindezeleka okwakungizungezile ngaduka endleleni, ngashiya imigomo yami yobuntu, ngafuna izikhundla eziphezulu ngokungenanembeza, ngaze ngabisha kulolu daka lwesono. Nami ngagcina sengiwumuntu omubi owayezifunela nje kuphela ubucebi, esebenzisa amandla ngokungafanele ukuze kuzuze yena, futhi owayekhwabanisa izimali zomphakathi. Kusukela ekwahluleleni okuvela emazwini kaNkulunkulu, ngabona ulaka olubi nobungcwele bukaNkulunkulu, ngase ngiqonda ukuthi ukudelela isimo Sakhe sokulunga kwakungavumelekile. Ngazisola ngezenzo zami ezimbi kanti nenhliziyo yami yagcwala ukuthuthumela. Ngabona sengathi ukube bekungeve kungenxa kaNkulunkulu engisindisa ngesikhathi esifanele futhi engitakula ebubini bodaka engangibishe kulona, ngabe ngaqalekiswa futhi ngajeziswa nguNkulunkulu ngalokho engangikwenzile. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuvumela ngikubone ukukhanya futhi, kanye nokuba ngiqonde imigomo yabantu. Kusukela manje kuya phambili, ngeke ngiphinde ngenz elezo zinto futhi ngithele igama likaNkulunkulu ngehlazo.
Ngenkathi ngiya ngokuya ngiqonda kangcono nakangcono iqiniso, ngathola insindiso enkulu nejulile evela kuNkulunkulu. Ngo-2009, ngase ngisebenze embuthweni iminyaka engama-20. Ngokwemigomo kazwelonke, ngase nginemvume yokuphuma ngiyozifunela umsebenzi ngokwami. Ngazimisela ukuba ngilahle ububi bese ngenza okuhle, ngakho ngashiya umbutho wezempi ngakhetha ukudluliselwa emsebenzini womphakathi, futhi ngabeka inhliziyo nomphefumulo wami ekusebenzeleni uNkulunkulu. Nomakunjalo, umholi wami wazama ukungincenga ukuba ngihlale embuthweni wangicela ukuba ngisicabangisise isinqumo sami, kanti omunye umholi osesikhundleni esiphezulu wazama ukungifungisa ukuthi uma ngiqhubeka nokusebenza kanzima ngizonyuselwa esikhundleni sephini likakhomanda wesikhungo. Ngake ngathandabuza kancane—leli kwakuyithuba engangikade ngililangazelele ubusuku nemini! Lalingavumi ukuphuma engqondweni yami leli phupho lalesi sikhundla, ngakho ngafuna usizo kuNkulunkulu ngakhuleka, “O, Nkulunkulu, ukuba sesikhundleni esiphezulu selokhu kwakuyiphupho lami. Manje selingifikele leli thuba futhi angazi ngikhethe kanjani. Ngicela ungikhanyisele bese ungihola!” Kamuva, ngacabanga ngamazwi kaNkulunkulu, “Uma usesikhundleni esiphakeme, waziwa ngokuhlonishwa, unolwazi oluchichimayo, unempahla eningi, futhi wesekwe abantu abaningi, kepha zonke lezi zinto zingakuvimbi ukuthi uze phambi kukaNkulunkulu ukwemukela ubizo Lwakhe, nalokho akuphathisa khona, ukwenza lokho uNkulunkulu akucela ukuba ukwenze, konke oyokwenza kuyoba okubaluleke kakhulu emhlabeni futhi uyobe ungolunge kunabo bonke esintwini. Uma wala ubizo lukaNkulunkulu ngenxa yesikhundla kanye nemigomo yakho, konke ozokwenza kuyobe kuqalekisiwe futhi kuyokwenyanywa nguNkulunkulu” (“UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Abantu beza emhlabeni futhi kuyivela kancane ukuhlangana Nami, futhi kuyivela kancane nokuba nethuba lokufuna nokuzuza iqiniso. Kungani ungeke usazise lesi sikhathi esihle njengendlela efanele yokuphila?” (“Amazwi Aya Kwabasha Nabadala” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Izwi ngalinye likaNkulunkulu lawushaya unembeza wami, futhi ngaphaphama ekuthandabuzeni kwami. Ngaba nenhlanhla yokubhekana nomsebenzi emhlabeni kaNkulunkulu osenyameni kanye nethuba eliyigugu lokufuna iqiniso kanye nokusebenzela uNkulunkulu. Kwaze kwayintokozo negugu elivela kuNkulunkulu! Yimuphi nje umkhakha womsebenzi ongaba ngobaluleke ukudlula ukusebenzela uMdali? Ngisho noma ungaba sesikhundleni esiphakeme kangakanani futhi uyisikhulu esiphezulu, uma ungamazi uNkulunkulu futhi ungakenzi izinguquko esimweni sakho, ekugcineni uyojeziswa nguNkulunkulu. Abantu abaningi abasezikhundleni ezikhethekile sebewele enhlekeleleni futhi bafa ngaphambi kwesikhathi sabo, futhi izikhulu eziningi zawa ukuwa okwesabekayo kanye nesiphetho esibi. Kodwa mina, ngangilwile futhi ngazama ukuba ngivelele njengesikhulu, nokwaholela ekubeni ngizicekele phansi kangangokuthi ngangcoliswa ngaba manikiniki, futhi ngaphila impilo yomuntu ongaseyena nomuntu ngokuphelele. UNkulunkulu wabe esengiholela kude nendlela engalungile wangikhombisa ngokusobala indlela yobuntu. Pho ngingaqhubeka kanjani nokukhetha lezo zingcuphe futhi ngibuyele ezindleleni zami zakudala? Ingxenye yokuqala yempilo yami yayigcwele izinhlupho ezazilethwe nguSathane kanye nobuqili nokwangilethela ubuhlungu obukhulu. Ngangingeke ngisagqilazwa, ngixhashazwe, futhi ngingcoliswe uSathane nasekupheleni kwempilo yami. Kwakudingeka ngishintshe indlela yami yokuphila, ngilandele uNkulunkulu ngokuqikelela, ngihambe indlela yokufuna iqiniso, futhi ngiphile impilo efanele. Ngakho ngazimisela ukufuna umsebenzi ngokwami ngishiye umbutho ngokuphelele. Noma kunjalo, ngenxa yokuthi inkohlakalo yami evela kuSathane yayijule kakhulu, umbono wayo wobuthi wokuvelela kanye nokuba umuntu obalulekile kwase kwakhele izimpande enhliziyweni yami futhi kaningi kungivimbela ukuba ngithathe indlela elungile. UNkulunkulu wayesenze umsebenzi omkhulu kakhulu wokwahlulela nokucwenga kimina ukuze angihole endleleni yeqiniso empilweni, futhi ngathola insindiso enkulu nakakhulu evela kuNkulunkulu.
Emva kokugcwalisa isibopho sami ebandleni isikhathi eside nokho, ngabona ukuthi abanye abaholi bebandla babesebancane kakhulu futhi omunye wabo wayekade engumngani wami, nokwangenza ngangakhululeki. Ngacabanga ngathi: Asikho ezikhundleni zenu zasezweni esiphakeme njengesami, kodwa izikhundla zenu zasebandleni ziphakeme ukudlula esami. Uma nikwazi ukuba ngabaholi abafanelekile, kusho ukuthi-ke kimina kuthe xaxa! Ngakho ngasebenza kanzima ngizama lokhu; ngavuka ekuseni ngehora lesihlanu njalo ekuseni ukuze ngifunde izwi likaNkulunkulu, futhi ngizihlelele imigomo yami—ngilalela okungenani izintshumayelo zamahora amabili kanye nokuhlanganyela ngokungena empilweni, ngifunda amaculo amathathu njalo ngeviki, ngihlela ukufunda wonke amaculo ezwi likaNkulunkulu. Ngasebenza ngokuzikhandla okukhulu nakakhulu ekwenzeni umsebenzi wami ebandleni. Inqobo nje uma kwakuyinto engingaba namandla okuyenza ebandleni, ngangiphuthuma ngiyenze kungakhathalekile ukuthi yayinzima noma ikhathaza kangakanani. Ngakolunye uhlangothi, ngangiqhosha ngamakhono nokwazi kwami phambi kwabanye odade nabafowethu, ngabukela phansi indlela abaholi bebandla ababexhumana ngayo nebandla noma ngigxeke ngokunganakekile indlela ababeqhamukela ngayo izinto noma bebhekana nezinkinga ngayo. Ngakho, ngaqhubeka ngaya phambili, ngihluleka ukuzakhela igama, nginethemba lokuthola isikhundla esicacile ebandleni ngokushesha. Ngonyaka ka-2011, ekugcineni ngakhethwa ukuba ngibe umholi webandla njengalokho ngangilindele. Ngajabula kakhulu futhi ngazilungiselela ukwenza izinto ngendlela ezoba nomehluko futhi ngifeze izinto eziningi ukuze abantu bahlabeke umxhwele. Kodwa-ke, umkami wangikhumbuza izikhathi eziningi ukuthi ngangingakufanele ukuhola abanye abantu futhi wancoma ukuba ngisule esikhundleni. Ngangingenayo enye indlela ngaphandle kokusula kodwa ngaphakamisa ukuba kukhethwe udadewethu othile njengomholi. Kodwa-ke ngangingakaxoli enhliziyweni yami. Emva kwesikhathi esingengakanani, ngathola ukuthi umholi wayenokusilela okuthize endleleni ayebhekana ngayo nezinkinga, izintshisekelo zami zaphinde zalunguza. Ngaphakamisa ngokungacacile ukuba athwale leso son obese esula, nokwakuzonginikeza ithuba lokuba ngikhethwe okhethweni olulandelayo. Kodwa-ke, odade nabafowethu abathile ababekuzwile lokhu bangihlaziya, basho ukuthi nganginobuqili futhi nginezintshisekelo kakhulu, nginjalo nje ngohlezi ngifuna ukulawula ibandla, ngakho bangixosha esikhundleni sami sobuholi beqembu. Angikwazanga neze ukukwamukela lokhu. Phela mina ngangiwumuntu onamakhono kabi; kwakungenzeka kanjani ukuthi ngingafaneleki ukuba umholi weqembu! Esikhathini sezinyanga eziningi, ngangingenelisekile neze enhliziyweni yami futhi ngangingeneme ngabodadewethu nabafowethu, ngakho angikhulumanga kangako emihlanganweni. Umoya wami wawugcwele ubumnyama futhi ngingakwazi ukuthola uNkulunkulu. Phakathi kwalobu buhlungu, ngacela uNkulunkulu ukuba angikhiphe ebumnyameni. Ngelinye ilanga, ngafunda amazwi kaNkulunkulu, “Namuhla, ngokubonwe umuntu, isinyathelo ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu sibuyela emuva ekudalweni komuntu, futhi isinyathelo ngasinye awusoze wasicabanga ngobuhlakani bomuntu, futhi kungaphezulu kwalokho akulindele. UNkulunkulu unikeza konke umuntu akudingayo, futhi kuzo zonke izindlela lokhu kuphambene nombono wakhe…. Ngokuphindela emuva emibonweni yakho, uyakwazi ukwamukela okwenziwa uNkulunkulu, futhi kungale ndlela kuphela lapho ungaqeda khona inkohlakalo yenu” (“Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza NgoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Uma ungalaleli manje, ekugcineni uzoqalekiswa—uzobe usujabula-ke? Awuyinaki indlela yokuphila kodwa ugxila esikhundleni nasegameni lakho; impilo yakho injani? … Awugxili ekufuneni ukuguqulwa komuntu kanye nokungena, kodwa ugxila ezifisweni eziyihaba nasezintweni ezivimba ukuthanda kwakho uNkulunkulu futhi ezikuvimba ekusondeleni Kuye. Ingabe lezo zinto zingakwazi ukukuguqula? Zingakwazi ukukuletha embusweni?” (“Kungani Ungazimisele Ukuba Yisiqhathaniso?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu aqinile okwahlulela ayihlaba inhliziyo yami, enza mina enginokuhlubuka ngazizwa nginamahloni futhi ngiphoxekile. Kwaze kwaba yilapho lapho ngabona khona ukuthi zonke izinto ezazenzeke kimina kamuva nje, yize noma kungekona engangikufuna, kwakungachazi ukuthi abantu babengiphethe kanzima nje. Kodwa kunalokho, babeyisahlulelo nje esivela kuNkulunkulu, kanye nensindiso Yakhe eyayifike ngesikhathi esifanele kimina. Umsebenzi kaNkulunkulu ngaleso sikhathi kwakufanele uguqule imicabango yabantu emidala nezindlela zokubuka izinto, ubasindise ethonyeni likaSathane, futhi ukuze bazuze iqiniso nempilo evela kuNkulunkulu ukuba baphile impilo eqhakazile. Angizange ngithathe indlela okuyiyo futhi ngilangazelele ukuthola iqiniso njengempilo yami, kodwa ngalangazelela isikhundla nodumo, futhi ngaze ngadlala amaqhinga ngacebo namacebo, okungahlukile emizamweni yokuba yisikhulu nomuntu obalulekile. Ingabe lokhu kwakungaphambene nomsebenzi kanye nentando kaNkulunkulu yokusindisa umuntu? Pho ngangizothola kanjani iqiniso futhi ngiphile impilo elungile uma ngisaqhubeka nokulandela lezi? Uma ngangingabuyelanga emuva, kwakungeke kungilimaze kungenze ngibe ngobhekwe yisijeziso esivela kuNkulunkulu lapho ephothula umsebenzi Wakhe? Ngenxa yalabo ababengizungezile, uNkulunkulu wangithena izinhlangothi ezithile waqondana nami “ngokungenamusa,” wangiphuca isikhundla sami, wahliphiza amathemba nezifiso zami wase ecekela phansi izintshisekelo zami kanye nezifiso ukuze ngigweme ukuba ngithathe indlela engalungile, ukuba ngilungise imibono yami yokwakufanele ngikulandele. Ngase ngiqonda ukulunga nesimo sikaNkulunkulu esingcwele, nokuthi zinhloso zami, okwakungikhuthaza, ngisho nanomcabango nesenzo ngasinye kwakungaphansi kweso likaNkulunkulu. UNkulunkulu wafeza usindiso lwami ngesikhathi esifanayo nangenkathi ekhombisa ubukhosi Bakhe. Emva kokubona umusa wensindiso kaNkulunkulu, angibange ngisazivumela ukuba ngizifake ekulahlekelweni yisikhundla, futhi ngaba namandla okulandelela iqiniso. UNkulunkulu wangithanda kakhulu kangangokuba wazama ukungisindisa, ngakho-ke ngangingeke ngikwazi ukumdumaza. Kwakufanele ngilalele izinhlelo zikaNkulunkulu, futhi noma ngabe ngangingumholi noma umuntukazana nje, kufanele ngilandelele iqiniso futhi ngigcwalise izibopho zami njengokunakho.
Emva kwesigamu sonyaka kamuva, umholi ebandleni wangihlelela ukuba ngiqhubeke nempilo yami yasebandleni kwelinye ibandla. Abaholi balo babekhethwa ngaleso sikhathi. Ngithe uma ngithola ukuthi ngabe sengikholwe kuNkulunkulu isikhathi eside ngaphezu kwabo bonke odade nabafowethu, ngazizwa ngijabule kakhulu futhi ngacabanga ngathi: Nali-ke ithuba lami. Manje ekugcineni sengizokhombisa amakhono ami njengomholi. Vele phela, nginesipiliyoni esiningi ngaphezu kwabo futhi ngaqala ukukholwa kuNkulunkulu ngaphambi kwabo. Akekho nje ofanelwe yilesi sikhundla ngaphezu kwami kubona. Ngenkathi ngisazilungiselela ukuba ngizethule kubona, omunye wodade wakwelinye ibandla esasinaye kulona ngaphambilini naye wathunyelwa ukuba azojoyina ukhetho. Ngangesaba ukuthi angase adalule ihlazo lami lokulwela isikhundla, nokwakungaba yimpoxo kimina, ngakho kwadingeka ngiliyeke leli cebo lami lokuqala. Nganquma ukuba ngizame ukukhethwa njengomholi weqembu, bese ngisebenza ngikhuphukele esikhundleni esiphezulu emva kwalokho. Kodwa kunalokho ngangingazange ngicabange ukuthi ngangingeke ngikhethelwe ukuba ngumholi weqembu, kodwa kunalokho ngizohlelelwa ukwenza umsebenzana nje ongatheni wokuhambisa izincwadi zomsebenzi kaNkulunkulu kodade nabafowethu. Mina, ukhomanda webutho ohloniphekile, ngangehla ngenyuka ngithunywa. Kwaba nzima kakhulu kimina ukwamukela lokhu. Noma kunjalo, emva kokubhekana nokwahlulelwa nokusola kukaNkulunkulu, ngaqonda ukuthi lokhu kwakuvela emthethweni kaNkulunkulu nasezinhlelweni Zakhe. UNkulunkulu wayebhekene ngqo nezifiso zami zokuthola isikhundla esiphezulu, ngakho ngazidela ngalalela. Kodwa-ke, kungakadluli sikhathi esingakanani indawo engangihambela kuyona imihlangano yabonwa ngamaphoyisa, ngakho ibandla langihlelela ukuba ngihlangane nabanye odade abadala ababili kwenye indawo. Njengomholi webandla, wayengakwazi ukusivakashela kaningi ukuze azokwenza umsebenzi wakhe wokusinisela njengebandla ngoba wayeshushiswa yiCommunist Party yaseChina. Ngaleso sikhathi, ngangingasakwazi ukubekezela: Ngaphandle nje kokuba ngangenziswa umsebenzi ongatheni, kwakudingeke ukuba ngihlangane nalabo badala abaphansi. Ngangifike kanjani lapha? Ngithe uma ngilokhu ngicabanga ngako, ngaya ngokuya ngiphatheka kabi. Ngaze ngagcina sengingasasiboni nesidingo sokuphila. Ngisebuhlungwini, ngakhuleka ngokukhulu ukuzinikela kuNkulunkulu ngacela ukuba angikhanyisele. Ngolunye usuku, ngafunda amazwi kaNkulunkulu, ayethi, “Njengoba uhamba indlela yanamuhla, yiluphi uhlobo lokufuna olufanele kakhulu? Ekufuneni kwakho, kufanele uzibone uyiluphi uhlobo lomuntu? Kufanele wazi ukuthi ungabhekana kanjani nakho konke okukwehlelayo namuhla, noma ngabe yizivivinyo noma ubunzima, noma ukusolwa nokuqalekiswa okunonya. Kufanele ukucabangisise kuzo zonke izimo” (“Labo Abangafundi Futhi Abahlala Bengazi Lutho: Abazona Yini Izilwane?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kusuka emazwini kaNkulunkulu, ngaqonda ukuthi ngangiqhutshwa yimvelo yami yobusathane nezazisayo, ngachezuka entandweni kaNkulunkulu, ngahamba endleleni engalungile ngoba ngifuna udumo nezikhundla. Ngenxa yalokho, ngacabanga ukuthi leyo misebenzi “yezikhundla” kwakuyiyona kuphela ebalulekile futhi nganyanga eminye imisebenzi, ngenyanya ngisho nalabo dade nabafowethu abaphansi ngoba ngicabanga ukuthi isikhundla sami sasithunazwa ukusondelana nabo. Isikhundla emphakathini, udumo kanye nomcebo kwase kudunge nengqondo yami. Noma kunkalo, ngangingazi ukuthi endlini kaNkulunkulu, yonke imisebenzi iyalingana, nokuthi odadewethu nabafowethu kanye nami sonke siyizidalwa ezilinganayo. Isikhundla sami esiphezulu emhlabeni sasingasoze sashintsha lelo qiniso. Ngicabanga ngalokhu, ngazizwa ngikhululekile kakhulu. Noma kunjalo, ngangazi ukuthi udumo nesikhundla kwakuyizinto ezaziyinkinga yami, ngakho ngakhuleka kuNkulunkulu ukuba ngifune iqiniso ngalokhu futhi isonjululwe le nkinga. Kamuva, ngezwa abanye beshumayela babelana ngamazwi mayelana nokungena empilweni, bethi: “Ngeyenu imibono, ingabe kubalulekile ukuba abantu bathole izikhundla futhi bazithakaselele? Kufanele nikwazi ukubona ngokucacile isikhundla nodumo bese ningakushayi mkhuba. Yizinto ezingasho lutho. Isikhundla esiphezulu asichazi isibusiso. Uma ungenaso isimo esihle, isikhundla esiphezulu singakulethela ishwa. Uma ungathungathi iqiniso, leso sikhundla siyoba umsuka wobubi obukhulu kuwena. Ngaphandle kweqiniso, ngeke ukwazi ukubona izinto ngokucacile, futhi ungonakaliswa kalula yizikhundla. … Ngeke ukwazi ukuba umholi ngaphandle kokulangazelela iqiniso; liyokucekela phansi. Uma ulangazelela iqiniso, ubuholi bungakuphelelisa” (“Ukuhlukaniswa kanye Nezisombululo Zabaholi Bamanga, Omphikikrestu Nababi” embhalweni othi Izintshumayelo Nokuhlanganyela (VII)). “Abantu babonakala belungile uma bengenawo amandla kodwa bathi nje bayothi bangaba nawo, baziveze uqobo lwabo. Amandla angabaphenya kanjani izinqe abantu? Uma umuntu engumuntu nje ojwayelekile, ubonakala elungile futhi enesithunzi nobuqotho. Unele nje athole amandlana angatheni, aphenduke abe ngowonakele. Luhlobo luni lwenkinga lolu? Abantu abakhohlakaliswe nguSathane bonke banemvelo efanayo” (“Indlela Abantu Okufanele Basebenzisane Ngayo Nomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphelelisa Umuntu” embhalweni othi Izintshumayelo Nokuhlanganyela (III)). La mazwi ngokushesha avula amehlo ami ngase ngibona ize leze kokufuna isikhundla. Ukuthathela phezulu isikhundla bese uhluleka ukulangazelela iqiniso kungaholela ekonakalisweni komuntu kuphela. Ake ubuke isibonelo sami embuthweni wezempi njengesibonelo—ngangizizonda leziya zikhulu ezikhohlakele ngenkathi ngiseyisosha. Kodwa, kuthe uma isikhundla sami siqhubeka nokwenyukela, ngaba yisikhulu esikhohlakele ngempela. Labo ababesezikhundleni eziphezulu babebukeka bebahle futhi bethembekile ngenkathi bengakabi sezikhundleni eziphezulu. Noma kunjalo, bathe nje lapho bethola ukuba namandla, baqala baziphathisa okozwilakhe futhi benza izenzo eziningi zobugebengu. La maqiniso ayenele ukubonisa ukuthi emva kokuba abantu bekhohlakaliswe uSathane, babeyobuswa ngokungakhethi yizinhlupho nobuqili; uma bengalandelanga iqiniso bashintsha isimo sabo, akukho okunye ababeba yikhona ngaphandle kobubi nokukhohlakala futhi benze ububi lapho sebephethe izikhundla eziphezulu, noma ngabe kusezweni noma endlini kaNkulunkuu, konke lokho okuhambisana nomphumela wokujeziswa ngobulungiswa nguNkulunkulu. Uma ngicabanga ngalokhu, ngazizwa ngizokwesaba kanye nokubonga. Phela ekugcineni ukukhathazeka kwami okuphindaphindiwe kwakuwusindiso lwami, olweza ngenxa yothando ayenalo ngami! Ngenxa yokuthi kwaba nzima ukunyukela ezikhundleni zezwe nokuba yisikhulu iminyaka eminingi, ngase ngingcoliswe ubuthi bukaSathane. Kungashiwo ukuthi ngase ngiyinhlanganisela yokuqhosha, ubuqili, ukuzicabangela nobugovu. Emva kokukholwa kuNkulunkulu, ngasazisa kakhulu isikhundla kodwa ngangalangazeleli iqiniso. Ngenxa yalokho, ngisho nangaleso sikhathi ngase ngithole iqiniso elincane, futhi nginokumesaba okuncane kakhulu uNkulunkulu. Ukube ngangisesikhundleni esiphezulu, ngangiyoba ngoshabasheka nakakhulu futhi ngiphathe abantu ngesandla sensimbi njengoba ngenza embuthweni, futhi ngangizogcina ngijeziswa ngokudelela isimo sikaNkulunkulu. Ngiyabonga ngokukhanyisela kukaNkulunkulu, ngoba ngakwazi ukubona ngokucacile umongo nomphumela wokulandelela udumo sezikhundla, futhi ngaphezu kwalokho, ngakwazi ukubona ukubaluleka ngokulandelela nokulangazelela iqiniso.
Emva kwalokho ngaqala ukugxilisa imizamo yami emazwini kaNkulunkulu. Ngalangazelela ngokunzulu ukuba amazwi kaNkulunkulu abe yimpilo yami nganganaku imisebenzi ehamba “nezikhundla,” angiphindanga ngabukela phansi eminye imisebenzi. Ngabona ukuthi yonke imisebenzi inokubaluleka kwayo, Ukuthi konke kwakubuswa futhi kumiselwe nguNkulunkulu, nokuthi umsebenzi wami wawungumthalo okwakufanele ngiwuthwale. Ngenkathi ngilangazelele amazwi kaNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke futhi ngizama ukugcwalisa izibopho zami, angizange nje ngigcine ngokuqonda amaqiniso amaningi engangingazange ngiwaqonde ngaphambilini, kodwa ngaphinde ngathokozela ubukhona bukaNkulunkulu ezikhathini eziningi. Ngathola ukukhanyiselwa kanye nokuholwa nguMoya oNgcwele, nokwangenza ngaba nokuzinza kanye nentokozo engachazeki. Emva kwesikhathi, ngazithola ngiba nokubheka phansi uma ngikhulumisana nabanye, futhi ngangingasaziqhayisi ngezikhundla zami zakudala embuthweni wezempi noma ngizisebenzisele ukuziphakamisa. Noma ngabe ubani owayebalula ngezinto engisilele kuzona, ngangiye ngilalele kuqala bese kamuva ngizihlolisise. Ngangikwazi ukuphatha odade nabafowethu basenkonzweni ababengafundanga kangako nabancinyane ngokulingana nabanye, futhi ngangingasazithathi njengophakeme kunabo. Ngaphambi kokuba ngiqaphele imibono yami yabe seyiguqukile kakhulu, futhi ngangingasenandaba nezikhundla nodumo futhi ngangingasaholwa futhi ngiqhutshwa yilezi. Ngithe uma ngibona odade nabafowethu abase bekholwe kuNkulunkulu isikhathi esincane kunami, ngazizwa nginomona kancane. Kodwa, ngakwazi ukukudlulisa lokho ngmkhuleko. Ngazizwa nginamahloni uma ngicabanga ukuthi ngangikade ngaphambilini ngitabalasela udumo nenzuzo ngabona kuyinto embi newubulwane. Manje, mina nomkami sigcwalisa izibopho zethu ekhaya ndawonye. Yize noma ingabalulekile kangako, kodwa ngizizwa nginokweneliseka futhi ngigcwele intokozo. Indodana yami nayo manje isiyakholwa kuNkulunkulu uSomandla, nokwenza umndeni wethu umndeni wamaKristu lapho kubusa khona izwi likaNkulunkulu. Noma ngabe ubani okhuluma iqiniso, sizomlalela lowo muntu. Ngisho noma kunesambulelo sesimo esikhohlakele, singaqonda, sibekezele bese sixolelana, futhi sizihlole njengokusho kwamazwi kaNkulunkulu, nosekwenze umndeni wethu ube nentokozo enkulu kunakuqala. Ngiqinisekile kakhulu ukuthi uNkulunkulu uSomandla owangishintsha mina nomkami, owasindisa umshado wami nomndeni wami, phezu kwalokho, wangisindisa enkohlakahlweni enkulu wabe esengishintsha ekubeni ngumuntu ophakeme, omubi nongcolile wangenza umuntu olangazelela ukukhanya nobulungiswa, onezimpokophelo zangempela. Uma ngifunda la mazwi kaNkulunkulu, ingxube yemizwa ngiyizwa isukuma ngaphakathi kimina: “Kusukela ekudalweni kwezwe kuze kube manje, konke uNkulunkulu akwenze emsebenzini Wakhe kuwuthando, ngaphandle kokuzonda umuntu. Ngisho nokusola kanye nokwahlulela enikubonile kuwuthando, uthando lweqiniso futhi lwangempela; lolu thando luholela abantu endleleni yokuphila efanele. … Wonke umsebenzi awenzile, uwenzele ukuholela abantu endleleni efanele ekuphileni, ukuze isintu siphile ngendlela ejwayelekile, kodwa umuntu akazi ukuthi kuqondiswa kanjani ukuphila. Ngaphandle kwalokho kuqondisa, uyophila ukuphila okungasho lutho, uyophila ukuphila okungasizi ngalutho futhi okungenamgomo, futhi ngeke wazi nhlobo ukuthi kunjani ukuba umuntu ojwayelekile” (“Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Yebo, ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu, bengingeke ngithathe indlela efanele empilweni; ngabe ngaqhubeka ngaya ngokuya ngidlondlobala ebubini, futhi ngabe ngaba umuntu ongcole kakhulu ozoqalekiswa nguNkulunkulu ekugcineni. Ukwahlulela kukaNkulunkulu okulungile okwangisindisa, kanye nokucwengwa okungenamusa okwangiguqula. Lokhu kungivumela ukuba ngiqonde ukuthi yini okungcolile futhi yini okungcwele, ubuhle nokulunga, kanye nenkohlakalo kaSathane nobubi. Ngeke ngiphinde ngilandele uSathane futhi, futhi ngizofuna iqiniso ngenhliziyo yami kuphela, ngikhiphe inkohlakalo kaSathane kimina, bese ngiphila impilo yomuntu yangokoqobo. Yize noma ngike ngabhekana nokuhlupheka kokujeziswa okuningi kanye nokucwengwa, ngizuze indlela eyigugu kakhulu empilweni, okungivumela ukuba ngizalwe kabusha bese ngingena endleleni yempilo.
Kulo nyaka, ngabuyela emuva ophikweni engangisebenza kulona ngaphambilini ukuze ngiyoqedela imisebenzi yezinqubo ezithile. Ngabona ukuthi abalingani bami bangaphambilini nabaholi bangaphambilini base bekhushuliwe ezikhundleni. Kuthe uma abalingani bami bangaphambilini bengibona, bathi, “Ukube nje wawungashiyanga umbutho wezempi, ngabe sewakhushulwa esikhundleni manje.” Kodwa akungikhathazanga lokho, futhi ngacabanga ngathi: Siyongisiza ngani isikhundla esiphezulu? Uma uphila ngaphandle kwemigomo, indlela noma umongo owuphilelayo njengomuntu kodwa uvele ubhuquze odakeni olubishayo lwesono, akulona uhlobo lwempilo oluyihlazo? Ave uyisigqila nje sikaSathane, ithoyizi lakhe? Uzobhekana nokujezisa kukaNkulunkulu obuwubulungiswa kanye nembuyiselo yezenzo zakho ekugcineni! Yize noma ngingenaso isikhundla esiphezulu, angikaze ngizisole ngesinqumo sami, ngoba nginakho ngempela ukuthula nenkululeko enhliziyweni yami, nokuyintokozo yangokoqobo. Ukuba yindalo okumele ube yiyona, ukulalela nokudumisa uNkulunkulu yiyona mpilo yomuntu yangempela, futhi kungalokhu kuphela ukuba ube nekusasa eliqhakazile!
Okwedlule: Ngisanda Kuqala Nje Ukuhamba Endleleni Efanele Yokuphila
Okulandelayo: Ukuzazi Wena Ngempela Kuphela Ngokuqonda Iqiniso
UXu Lei Edolobheni LaseZaozhuang, Esifundazweni saseShandong Ngelinye ilanga ngathola isaziso esasivela kumholi wami omkhulu, singicela...
URongguang Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan Emva kokulandela uNkulunkulu uSomandla, ngafakwa ejele ngenxa yokukholwa...
UBaixue Edolobheni LaseShenyang Ngenxa yesidingo somsebenzi, ngadluliselwa kwenye indawo yokusebenza. Ngaleso sikhathi, nganginokubonga...